Purushottama လ၏ဂုဏ်တော်များ (Adhik Maas) - ဝေဒနက္ခတ်တာရာဘုရားကျောင်း
Purushottama လ၏ဂုဏ်တော်များ (Adhik Maas)
နွေ ဦး၊ အကြို ၀၆၊ ၂၀၂၀ / ထုတ်ဝေသည် ရန်ပုံငွေရှာခြင်း, ပွဲတော်များ
Purushottama လ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်သမိုင်းကြောင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ adhik maas ကို Goloka Vrindaban ၏အမြင့်ဆုံးသောဝိညာဉ်ဘုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောရှည်လျားသောသမိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သူမသည် Krishna အားကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်းထက်ပိုမိုအကျိုးခံစားခွင့် ၁၀၀၀ ပိုရှိသည်။ Damodar လ
Purushottama Maas သည်သုံးနှစ်တိုင်းတွင် လာ၍ လနှင့်နေပြက္ခဒိန်များကိုညှိရန် Vedic ပြက္ခဒိန်၌အပိုလတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချိန်သည်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သောအလေ့အကျင့်များနှင့်ကတိများသည်အလွန်အကျိုးရှိသည်။
Lord Sri Krishna ကပြောခဲ့သည် (Padma Purana)
“ လူသားအားလုံးသည်ဤ Purushottama လ၌အချို့သောကိုးကွယ်ဆည်းကပ်မှု ၀ တ်ပြုသင့်သည်။
Srimad Bhagavatam နှင့် Bhagavad-gita၊ အထူးသဖြင့်အခန်း ၁၅၊ Purushottama Yoga
ghee diya (ဆီမီး) ကိုနေ့စဉ်ပူဇော်ပါ
အလှူရှင်များအားလုံးကိုစက်တင်ဘာ ၁၈ မှအောက်တိုဘာ ၁၆ အထိလှူဒါန်းရန်အလှူဒါနပြုရန်ဤမင်္ဂလာအချိန်ကိုသုံးရန်စဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းသည် TOVP တွင် Prabhupada murti အသစ်ကိုကြီးကြီးမားမားတပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ်သင်၏ကတိစကားကိုဖြည့်ပါ။ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာမတိုင်မီသင်၏ကတိစကားကိုပြည့်စုံပါကတစ်ပြိုင်နက်သင်၏အမည်ကိုလည်းထည့်သွင်းလိမ့်မည် TOVP ကိုးကွယ်မှုစာအုပ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်သူ၏ ၁၂၅ နှစ်မြောက် Vyasa Puja နှစ်ပတ်လည်တွင် Srila Prabhupada အားပူဇော်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင် TOVP ၌ Prabhupada murti အသစ်၏သမိုင်းဝင်ကြီးကျယ်သောတပ်ဆင်မှုအတွက် abhisheka ကိုပံ့ပိုးရန် ဒီမှာ.
ဖတ်ကြည့်ပါ Purushottama Maas ၏ပြီးပြည့်စုံသောသမိုင်း.
အောက်တွင် tag လုပ်ခဲ့သည် purusottama လ, Purusottama vrata